ဖိုင်များကို Iphone (သို့) Android စက်များအကြားမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း Gadget သတင်း
Paco L ကို Gutierrez | | အန်းဒရွိုက်, Apple, လဲ tutorial
အကယ်၍ Iphone ကိုသင်သိလျှင်၊ သင်ဟာ AirDrop၊ Apple Device များကြားဖိုင်အမျိုးမျိုးကိုကြိုးမဲ့ဖြင့်ဝေမျှနိုင်သောဇာတိစနစ် AirDrop ကိုလည်းသိလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows PC, တက်ဘလက်သို့မဟုတ် Android စမတ်ဖုန်းနှင့်ဖိုင်များကိုမျှဝေလိုပါကဤနည်းလမ်းသည်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း၊ အခြားနည်းလမ်းများဖြစ်သောအီးမေးလ်သို့မဟုတ်မိုးတိမ်ထဲရှိအကြောင်းအရာများကို upload တင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။
ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် Snapdrop ၎င်းသည်အင်တာနက်ဘရောက်ဇာနှင့် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုများပါရှိသည့်မည်သည့်စက်နှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်သည်ဒီမှာရှင်းပြပါမယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှဖိုင်များကို upload သို့မဟုတ်မျှဝေရန်နည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်အချို့သော Microsoft's Onedrive, Google's Drive, Dropbox သို့မဟုတ် Amazon ၏ cloud ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သည်။ Telegram ကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများသို့မဟုတ် နင်။ သင့်မှာ iPhone တစ်ခုရှိရင် AirDrop နဲ့အများကြီးပိုလွယ်ပါတယ်Apple မှစီးပွားဖြစ်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သောဖိုင်များကို Apple စက်များအကြားကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့်ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ အကြံဥာဏ်ကကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုသုံးပြီးဖိုင်တွေပို့ဖို့ဖြစ်တယ်ဤဖိုင်များသည်အင်တာနက်မှတဆင့်သွားနိုင်သည်မဟုတ်ပါ device မှ device သို့ router မှတဆင့်သွားပါ.
AirDrop သည် Apple သုံးစွဲသူများအကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံး application တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သင် Android ကိုပြောင်းပြီးသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင် တိတ်ဆိတ်သော Android တွင်ကျွန်ုပ်တို့တုပထားသောပလက်ဖောင်း (သို့) စက်ကိရိယာကိုမသက်ဆိုင်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ထားသောအတုများရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကိုတိုတောင်းသောအကွာအဝေးတွင်အလွယ်တကူလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Snapdrop မည်သည့်တပ်ဆင်မှုမလိုအပ်သည့်အခမဲ့အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု။
Apple Airdrop မှုတ်သွင်း Snapdrop သည်ဤရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်ရန်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။ HTML5, ES6, CSS3, WebRTC, Web Sockets နှင့် NodeJS (HTML နှင့် CSS လက်ရှိဝဘ်စာမျက်နှာများကိုအခြေခံသည့်နည်းပညာများဖြစ်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာမှတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သည်။ မည်သည့်ခေတ်မီ browser ကိုမဆိုသဟဇာတDesktop (Windows, Mac, Linux) နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ (Android, iOS) နှစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည် WebRTC ဖိုင်မျှဝေမှုအတွက်နှင့် Safari သို့မဟုတ် Internet Explorer ကဲ့သို့သောမထောက်ပံ့သော browser များအတွက်အသုံးပြုပါ Web Sockets.
၏စစ်ဆင်ရေး Snapdrop အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် ကျနော်တို့အသုံးပြုမယ့်စက်နှစ်ခုကိုမှာ web browser ကိုဖွင့်လိုက်တယ်လက်ခံရရှိရန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသည်လုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသည်။
ကိရိယာနှစ်ခုလုံးကိုတူညီတဲ့ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရမယ်ထို့ကြောင့် browser တစ်ခုစီတွင် operating system နှင့် browser ၏အမည်ပါသောအခြားစက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ငါတို့သာလုပ်ရမယ် ကြောင်း device ကိုရွေးချယ်ပါ ပို့ရန်ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အော်ဒီယိုများ၊ ပုံများ ... သင်လိုချင်တာနဲ့အရွယ်အစား။
ဖိုင်ပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအပြင် Snapdrop သည်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့ကိုလွယ်ကူစေသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည်အနီးအနားရှိကိရိယာများနှင့်မျှဝေရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသောလုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီ option ရှိတာကအခြား device ကိုနှိပ်ပြီးကိုင်ထားရုံနဲ့သတင်းတိုတိုပို့ပေးလိမ့်မယ်။
Transfer speed ၏မြန်နှုန်းသည် router နှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့် bandwidth တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Snapdrop သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်မလိုအပ်မျှဖိုင်များကိုမည်သည့်ဆာဗာတွင်မသိမ်းဆည်းပါ။ ဒီ app ကို encrypt လုပ်ထားပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး မျှဝေဖိုင်များ၏အရွယ်အစားမ။ ကျနော့်အမြင်အရ၎င်းသည်အတော်အတန်တည်ငြိမ်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောစနစ်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » iPhone နှင့် Android ကြားရှိဖိုင်များကို SnapDrop ဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်